ဝင်ငွေ၊ ထွက်ငွေ နှင့် ဘတ်ဂျက် စီမံခြင်း
Feb 22, 20202min
ဒုက္ခတွေကို Facebook ပေါ်တင်ပြီးငြီးနေမယ့်အစား Application ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ expenses တွေ income တွေကို ပုံမှန် record လုပ််၊ ကိုယ့်ရဲ့ data တွေကို ပြန် analyze လုပ်ပြီး မကောင်းတဲ့ habit တွေကိုဖျောက်ပြီးတော့ financially growing up ဖြစ်နိုင်ကျပါစေ။
Title လှအောင်တာ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ရေးလိုက်တာပါ တကယ်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာက application တခုကို အသုံးပြုပြီး ကိုယ့်ရဲ့ personal income နဲ့ expenses ကို ဘယ်လိုဘယ်ပုံ track လုပ်တာနဲ့ analyze ကို ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတာကို ကိုယ်ပိုင်အတွေ့ကြုံနဲ့ နှိုင်းယှဥ်ပြီးပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်က FA ဖြစ်တဲ့အတွက် နေ့စဥ်ဖြတ်သန်းတဲ့ဘဝကို ပိုမိုလွယ်ကူအောင် application တွေရဲ့ အကူညီကို အမြဲတမ်းသုံးဖြစ်တယ်၊ အဲ့လိုနေ့စဥ်သုံးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် application တခုကို အတည်တကျမသုံးခင်မှာ ရေရှည်သုံးဖို့အဆင်ပြေ၊ မပြေ သေချာလေ့လာပြီးမှ သုံးဖြစ်တယ်။ အဲ့လို စိစစ်ရွေးချယ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အရင်ကလည်း article တွေရေးဖူးတယ်၊ Podcast ရယ် Running App ရယ်၊ ဒီတခါလည်း application ကောင်းကောင်းတစ်ခုရွေးတာကနေစမယ်၊ ဒါပေမယ့် အဲ့အပိုင်းကိုတော့ အရင် article တွေတုန်းကလို အသေးစိတ်မရေးတော့ဘူး။
Online မှာ ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး application တွေရာချီရှိတယ်၊ မြန်မာဘာသာနဲ့ ဟာတွေတောင်ရှိသေးတယ်၊ အဲ့ထဲကမှ ကျွန်တော့်အမြင်မှာ အကောင်းဆုံးတစ်ခုကတော့ Spendee ဆိုတဲ့ application ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့် အကောင်းဆုံးလို့ ပြောရတာလဲဆိုတော့ ပထမတစ်ချက် free ဖြစ်တယ်၊ ပိုက်ဆံ ပေးသုံးရင်တော့ feature အပိုတွေ ထပ်ရတာပေါ့၊ နောက်တစ်ချက်က Android, IOS နဲ့ web browser မှာပါ သုံးလို့ရတယ်။ ကိုယ်နေ့စဥ်သုံးရမယ့် app က Android, IOS နှစ်ခုလုံးမှာ available ဖြစ်ဖို့က တကယ် အရေးကြီးတဲ့အချက်လို့ ကျွန်တော်မြင်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ဥပမာ ကိုယ်နေ့စဥ် မဖြစ်မနေသုံးရမယ့် application ၃ ခုလောက်က IOS အတွက်ပဲရှိတယ်ဆိုရင် ကိုယ်က အလိုလိုနေရင်း Apple ကချုပ်နှောင်တာကို ခံလိုက်ရပြီ၊ OS independent မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။ နောက်ထပ် Spendee ကို ကြိုက်ရတဲ့အချက်က မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပိုပြီးကိုက်ညီတယ်၊ ဘာကြောင့် အဲ့လိုပြောရလဲဆိုတော့ သုံးကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့ app တော်တော်များများက ကိုယ့်ရဲ့ bank account နဲ့ အတင်းချိတ်ခိုင်းတယ်၊ ချိတ်မယ်ဆိုတော့လဲ မြန်မာနိုင်ငံက ဘဏ်တွေကို support မလုပ်ဘူး။ နောက်တခုကတော့ UI/UX ကောင်းတယ် ကြည့်ရတာမျက်လုံးအေးပြီး သုံးရတာလည်းလွယ်တယ်။
‎Spendee Budget & Money Tracker
Understand your finances better with Spendee, the FREE budgeting app that tracks your spending, optimizes your budget and helps you save money. Spendee will help you track your money (both expenses and income) automatically through bank sync or manually so that you can analyze, organize and budget…
App StoreCleevio s.r.o.
Spendee - Budget and Expense Tracker & Planner - Apps on Google Play
Thanks to Spendee you will be able to track your money (both expense and income) automatically through bank sync 💳 or manually so that you can analyze 📊, organize and budget 💰 them for the future. DOWNLOAD NOW Invite others to manage your shared family or household budgets. Manage your money in …
Apps on Google PlaySPENDEE a.s.
အသုံးပြုပုံကတော့ သိပ်ပြီး ထူးထူးခြားခြားမရှိဘူး၊ ပုံထဲကအတိုင်းပဲ expenses (သို့) income ရွေးမယ်၊ နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ category ရွေးမယ်၊ amount ထည့်ပြီးတော့ note မှတ်မယ်၊ ဒါပဲ။
အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ Spendee က web browser မှာလည်းရတယ်၊ web browser မှာပါသုံးလို့ရတဲ့အတွက် တခါတလေ ကိုယ့်ရဲ့ expenses ကို ရက်အကြာကြီးမမှတ်ဖြစ်ဘဲ နောက်မှ တထိုင်ထဲ ပြန်မှတ်မယ်ဆိုရင် ဖုန်းနဲ့မှတ်တာထက် ကွန်ပျူတာက web browser နဲ့ဆိုရင် screen လဲပိုကြီးတဲ့အပြင် keyboard နဲ့ရိုက်ရတာဆိုတော့ ပိုပြီး convenience ဖြစ်တာပေါ့။
ပုံမှန်အားဖြစ် category လောက်နဲ့တင် လုံလောက်ပြီ၊ Spendee မှာက hashtag နဲ့ပါမှတ်လို့ရတယ်၊ အစ ကတော့ သိပ်အသုံးဝင်မယ်လို့မထင်ပေမယ့် သုံးတာ နည်းနည်းကြာတော့ တော်တော် အသုံးဝင်တဲ့ feature တခုဖြစ်နေတယ်၊ ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင် သွားတာလာတာကို Transport ဆိုတဲ့ category နဲ့မှတ်တဲ့အပြင် note မှာ taxi နဲ့ bus ကို hashtag သုံးထားတဲ့အတွက် အပေါ်ကပုံထဲကလို ပြန်ရှာချင်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်လချင်းစီရဲ့ စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ် ကိုခွဲပြီးသိချင်လို့ရှိရင်ဖြစ်ဖြစ် တော်တော်အသုံးဝင်တယ်။
ဥပမာ ကိုယ့်မှာ ကောင်မလေး နှစ်ယောက်ရှိတယ် ဆိုပါစို့ Myat Noe နဲ့ Thiri ပေါ့၊ သူတို့နဲ့ တခုခု သွားစားတိုင်း category မှာတော့ Food & Drink ပေါ့ hashtag ကတော့ Myat Noe နဲ့သွားစားတာဆိုရင် #mn၊ Thiri နဲ့သွားစားတာဆိုရင် #tr၊ လကုန်လို့ ကုန်ကျစရိတ်တွေ ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျရင် အပြင်ထွက်စားတာဘယ်လောက်ကုန်သွားပြီလဲ၊ နှစ်ယောက်လုံးကို ကော မျှမျှတတကျွေးရဲ့လား၊ တစ်ယောက်ယောက်ကိုများ ပိုပြီးအလိုလိုက်မိသွားလားဘာညာ analyze လုပ်လို့ရတာပေါ့။
နောက်ထပ် ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ feature က repeat ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကို schedule နဲ့ မှတ်လို့ရတယ်၊ ဥပမာ ကိုယ်က နေ့တိုင်းရုံးသွားရုံးပြန် Bus ကားစီးတယ် ၄၀၀ ကျတယ်ဆိုရင် schedule မှာ အဲ့အတွက် every work day လုပ်ထားလိုက်ရင် ကိုယ်က နေ့တိုင်း မှတ်နေစရာ မလိုတော့ဘူး၊ အဲ့လိုပဲ တခြားပုံသေဖြစ်နေမယ့်ဟာတွေကို schedule နဲ့ မှတ်ထားလိုက်ရင် manual ရိုက်ထည့်ရတာသက်သာသွားတာပေါ့၊ ဥပမာ salary, tax, monthly bills.
အဲ့ဒါက သိပ်တော့ မသုံးဖြစ်ပေမယ့် Bangkok သွားတုန်းက Thai Bath နဲ့ expenses ကိုမှတ်တော့ အဲ့တုန်းက ပေါက်စျေးနဲ့ မှတ်ပေးတဲ့အပြင် note မှာ သူ့အလိုလို exchange rate ထည့်ပြီး မှတ်ပေးတယ်။
ကျွန်တော် သုံးတဲ့ပုံစံကတော့ ရှင်းတယ်၊ Wallet တခုပဲထားတယ်၊ အဲ့ဒီ wallet ထဲကို ဝင်ငွေဆိုရင် income နဲ့မှတ်တယ်၊ အသုံးစရိတ် မှန်သမျှကိုလဲ expenses နဲ့ပဲ အဲ့ဒီ wallet ထဲကိုမှတ်တယ်။
income ကတော့ record နည်းတဲ့အတွက် သိပ်ပြီး ပြောစရာမရှိဘူး၊ expenses ကို မှတ်တဲ့အခါကျရင် category တွေ hashtag တွေနဲ့သေချာခွဲပြီးမှတ်တယ်၊ ဒါမှ လကုန်လို့ရှိရင် ငါဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လောက်သုံးဖြစ်သွားလဲဆိုတာ ပြန်ပြီး ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလို့ရမှာ၊ ဥပမာ ဒီလရဲ့ Transport category မှာ ကုန်တာ အရမ်းများနေပြီ ဘာလို့ အဲ့ဒီလောက် ကုန်ရတာလဲ ဆိုတာကို ပြန်ကြည့်လိုက်ရင် bus စီးတဲ့အကြိမ်ရေက နည်းပြီး taxi ချည်းပဲလိမ့်စီးနေလို့ကို၊ အဲ့ဒီလို သိလိုက်ရတော့ အဲ့အတွက် အသုံးစရိတ်ကိုလျှော့ချင်ရင် နောက်လတွေကျရင် taxi လျှော့စီးပေါ့။ အဲ့လိုနဲ့ပဲ ကိုယ့်ရဲ့ ပိုက်ဆံသုံးတဲ့ habit တွေ ပြောင်းလဲလာတယ်။
စျေးကြီးတဲ့ပစ္စည်း တခုခုဝယ်စရာ ရှိလို့ရှိရင်လည်း category တခုခြင်းစီရဲ့ အသုံးစရိတ်ကို နည်းနည်းစီ လျှော့ချပြီးတော့ ငွေပိုလာအောင်လုပ်လို့ရတယ်။ ဥပမာ ၁သိန်းခွဲတန် headphone တခုကို နောက်သုံးလနေရင် ဝယ်မယ်ဆိုပါစို့။ တစ်လကို ကိုယ့်ရဲ့ အသုံးစရိတ် ၅သောင်း စီလျှော့ချမှရမယ်၊ အဲ့အတွက် Transport ကို ၁ သောင်းခွဲ၊ Drink ကို ၂ သောင်း၊ Cinema ကို ၁ သောင်းခွဲ ဆိုပြီး အသီးသီးလျှော့သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင် တကယ်ဝယ်တဲ့အခါကျတော့ total balance အများကြီးလျှော့မသွားတော့ဘူးပေါ့။ “ဝယ်စရာလေးရှိလို့ ပိုက်ဆံလေးချေးပါဦး” ဆိုပြီးတော့လည်း မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဆီ လိုက်ချေးရတဲ့ ဒုက္ခလည်း မရှိတော့ဘူး။
နောက်ထပ်တခုက ကျွန်တော် Bangkok သွားတုန်းကအတွေ့ကြုံ၊ အဲ့ခရီးစဥ်အတွက် ဘယ်လောက်ကုန်လဲ ဆိုတာ သိချင်တဲ့အတွက် #2k18JunBKKtrip ဆိုပြီး ပုံမှန် category တွေအပြင် hashtag နဲ့ပါတွဲမှတ်တော့ အဲ့ခရီးစဥ်အတွက် ကုန်ကျစရိတ် စုစုပေါင်းကို အတိအကျ သိခဲ့ရတယ်။ အဲ့တော့ နောက်တခေါက် Bangkok သွားမယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ကုန်မှာလဲဆိုတာ တွက်ကြည့်လို့ရသွားတာပေါ့။ တခြား တယောက်ယောက်က သွားချင်တယ်ဆိုလည်း မင်းဒီလောက်တော့ ကုန်နိုင်တယ် ဆိုပြီးတော့လည်း ပြောပြလို့ရမယ်။
ဒီနိုင်ငံက ယောကျ်ားထုအများစု (အများစုနော် အများစု) ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်ခဲတခုဖြစ်တဲ့ ဖွန်ကြောင်စရိတ်၊ ရည်စားမဖြစ်ခင်လည်း ကိုယ်ပဲရှင်းရတယ်၊ ရည်စားဖြစ်သွားတော့လည်း ဆက်လက် ရှင်းနေရတုန်း၊ လက်ဆောင်ပေးတာတို့၊ surprise လုပ်တာတို့၊ အဲ့အတွက် တစ်လတစ်လ ဘယ်လောက် ကုန်သွားလဲဆိုတာ track လုပ်လို့လွယ်သွားတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ category အသီးသီးနဲ့ မှတ်တဲ့အပြင် hashtag နဲ့ပါ #flirtingTax ဖြစ်ဖြစ် #ဖွန်ကြောင်စရိတ် ဖြစ်ဖြစ် မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဖွန်ကြောင်စရိတ်တွေ ဘယ်လောက်ကုန်နေပြီလဲဆိုတာ အတိအကျသိရမယ်၊ budget သတ်မှတ်ပြီးတော့ ဖွန်ကြောင်မလွန်အောင် ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း နေလို့ရသွားမယ်။
အသုံးစရိတ်ကို အမြဲမှတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဝင်ငွေနဲ့ ထွက်ငွေကို မျှတအောင် ထိန်းပြီး သုံးဖို့ ပိုလွယ်သွားမယ််၊ ဥပမာ ကိုယ်က တစ်လဝင်ငွေ ၁၀သိန်း ရှိတယ်ဆိုပါစို့၊ လတစ်ဝက်လောက် မှာတင် ကိုယ့်ရဲ့ expenses က ၇သိန်း လောက်ရှိနေပြီဆိုရင် ကျန် ၁၅ရက်မှာ ၃သိန်းနဲ့ လောက်အောင် သုံးရတော့မယ်ဆိုတာသိမယ်၊ အဲ့လိုတာ track လုပ်မထားမိရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ငါ သိပ်မသုံးရသေးပါဘူးလို့ထင်ပြီး ကျန် ၁၅ ရက်ကိုလည်း ပထမ ၁၅ ရက်အတိုင်းပဲ ဆက်သုံးသွားမယ်ဆိုရင် ထွက်ငွေနဲ့ ဝင်ငွေမမျှဘဲ ကြာရင် ဒုက္ခများသွားနိုင်တယ်။
ကျွန်တော် သုံးလာတာ ၃နှစ် နီးနီးရှိသွားပြီ၊ နှစ်ကုန်လို့ရှိရင် ကိုယ့်ရဲ့ တစ်နှစ် ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေ စုစုပေါင်းကို ပြန်ကြည့်ရတာလည်း feel တမျိုးပဲ၊ တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ်ဝင်ငွေတိုးလာတာကို ကြည့်ပြီးတော့လည်း တော်တော်ပီတိဖြစ်ရတယ် (ထွက်ငွေလဲတိုးသွားပါတယ် ဟိဟိ)၊ နောက်ထပ်တစ်ခု သတိထားမိတာကတော့ လကုန်ခါနီး ပိုက်ဆံပြတ်လို့ငြီးတာတွေလည်း မရှိတော့သလို၊ လကုန်လို့ လစာထုတ်တော့လည်း အရမ်းကြီးပျော်မနေတော့ဘူး၊ မပျော်တော့ဘူးဆိုတာထက် လကုန်ရက်ကို မျှော်နေတာမျိုး မရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာပိုမှန်မယ်။
အပြီးထိ ဖတ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ လစာထုတ်တာ မကြာသေးဘူး အကြွေးဆပ်လိုက်လို့ကုန်သွားပြီတို့၊ shopping တစ်ခါပဲထွက်လိုက်တာ နောက်ရက်တွေကျရင် ခေါက်ဆွဲပြုတ်ပဲစားရတော့မယ်တို့ စတဲ့စတဲ့ ဒုက္ခတွေကို Facebook ပေါ်တင်ပြီးငြီးနေမယ့်အစား Application ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ expenses တွေ income တွေကို ပုံမှန် record လုပ််၊ ကိုယ့်ရဲ့ data တွေကို ပြန် analyze လုပ်ပြီး မကောင်းတဲ့ habit တွေကိုဖျောက်ပြီးတော့ financially growing up ဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။